Obbo Abrahaa Dastaa sanbata galgala naannoo sa’a 1:30 gara mana ofiitti galaa utuu jiranii naannoo abraa kaasil jedhamutti namoonni sadii eeggatanii morma isaanii hudhanii reebanii mobaayla isaanii fi maallaqa borsaa isaanii keessa ture mara harkaa fudhataniiru jedhu dubbi himaan Arrena Tigraay obbo Andoom G/Sillaasee.
Morma isaanii hudhaniis miidhaan irra ga’eeraa jedhan. obbo Abrahaa namoonni dhaqqabanii harkaa baasan jedhaniiru.
Namoonni sun gara dukkanaatti harkisuuf utuu yaalanii dargaggoonni arganii kanneen yakka sana raawwatan waliin wal loluu dhaan ari’anii lubbuu isaanii oolchuu danda’aniiru. Sana boodas mana yaalaatti geessan.
Haalli obbo Abrahaa Dastaa yeroo ammaa maal akka fakkaatu mana yaalaatii ba’anii yoo ta’e fayyummaan isaaniis haala maalii irra akka jiru gaafatamanii mormi isaanii waan hudhameef naannoo qoonqoo isaanii dhiita’ee akka madaa’uu ta’eera. Miidhaa kanaafis wal’aansa argatniiru. Amma haalli fayyummaa isaanii gaarii dha. Isa duraan miidhaan irra ga’e irra amma wayyaawaa jiru.
Haala isaas poolisii naannoo fi kan aanaa sanaatiif gabaasnee jirra jedhan.
Mootummaanis yakka kana irraa ofii isaa fageessee adeemsa hojii demokraasummaatti akka seenu gaafanna jechuu dhaan kanneen kana dura yakka hojjetan baatii tokkoool hidhamanii hin beekan jedhan.
Torbee kanas Tembeenii fi zooniiwwan gama dhiyaa keessatti miseensonni keenya doorsisamanii hidhamaa jiru waan ta’eef haall isaa yakkuma callisee hojjtame miti jechuu dhaan dubbi himaan Arrenaa Tigraay obbo Andoom G/Sillaasee ibsaniiru.
Gama biraatiin dubbi himaan naannoo Tigraay obbo G/Mikaa’el Meles naannoo sana keessaa waa’ee ilaalcha isaa polotiikaaf jedhee kan haleellaan irra ga’e ykn irra ga’u hin jiru jedhu.